ငါပဲလားဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးတိုင်းစာသားအတိုင်း LOUISE နာမည်အလယ်မှာရသလား။ ဒီထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ - သတင်း
ငါပဲလားဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးတိုင်းစာသားအတိုင်း Louise နာမည်အလယ်မှာရှိသလား။ ဒီထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားနေ
နာမည်များ၏ကျော်ကြားမှုသည်သင်မွေးဖွားသည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်မှာကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာ Roisin M၊ Roisin K၊ Roisin L စာသင်ခန်းထဲမှာ Roisins သုံးယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်အပါအ ၀ င် Amys ခြောက်ယောက်ရှိတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းများတွင်ကလေးတစ်ယောက်ရှိသည့်အခါတိုင်း၎င်းသည်အမြဲတမ်းနော or သို့မဟုတ်အင်းဗာ (တစ်ခါတစ်ရံအိန္ဒိယနိုင်ငံ) ဟုခေါ်သည်။
သို့သော်ဘဝ၌စဉ်ဆက်မပြတ်တ ဦး တည်းရှိပြီးသင်သိသောမိန်းကလေးတိုင်းတွင်အလယ်နာမည်အမည် Louise ရှိသည်။ Louise ရဲ့အလယ်တန်းနာမည်ကကွဲပြားခြားနားမှုအားလုံးကိုကျော်လွန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ခွဲခြားသည်။ ငါတို့ဟာငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်ရွယ်တူငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ဆိုပေမယ့်တစ်ချိန်ချိန်မှာ Louise ကို Facebook ရဲ့နာမည်ထဲထည့်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
သငျသညျ tinder ၏ logout လျှင်သင်ဆဲပေါ်လာကြဘူး
- BB (@RobbyBobbyBell) စက်တင်ဘာ 22, 2016
- ??? ?????? (@LeeMifsud) အောက်တိုဘာလ 19, 2016
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိ Louise အမည်ကိုမိန်းကလေးတိုင်းပြောင်းခဲ့သည့်နေ့ကိုပြန်သတိရပါ
- Ckeanie (@connnorkeanie) ဇူလိုင်လ 28, 2016
ရင်ခုန်စရာမိခင်နှင့်ကလေးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုဖြတ်သန်းခြင်းကကျွန်ုပ်အားများစွာပြောစေသည် - Louise (နာမည်ကြီးစစ်သည်တော်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော) သည်အမြဲတမ်းလူသိများသောနာမည်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ တွင်မိန်းကလေးသန်း ၁၀၀ ကို Louise ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ တွင် ၁၃၆ ခုသာရှိသည်။
ဒီအကြောင်းသင်၏မိခင်မှမရည်ရွယ်ပါစေနဲ့, ငါသူမနောက်ထပ်သွားပြီနိုင်တူသောငါပဲပြောနေတာ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တော့မဟုတ်အဲဒီအချိန်ကအင်တာနက်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာအေးဆေးပါပဲ။
ငါသိတဲ့မိန်းကလေးတိုင်း 'Louise' ကိုသူတို့အလယ်နာမည်ပေးသလိုခံစားရတယ်
- whatsername (@Jessfullman_) ဇူလိုင်လ 7, 2016
Louise ဟာနာမည်ကြီးလှတယ်။ ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့အဖြူရောင်ဗြိတိန်မိန်းကလေးတိုင်းကသူတို့နာမည်အလယ်ကဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
- Louise !!!!!!!!!!!!!! (@Twiggley) ဇွန်လ 16, 2016
Year9ဆိုတာနာမည်ကြီးနာမည်မရှိတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းက 'Louise' ဖြစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နှစ်
- ရာချ (@ Rachael_xx0) ပြီလ 6, 2016
အဖြူရောင်မိန်းကလေးတိုင်း၏အလယ်နာမည်ဖြစ်သော Louise သည်
- အမ်မလီဒိုင်ဗာ (@_emilydiver) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်တိုင်းအနည်းဆုံးမိန်းကလေးတစ်ယောက်က 'ငါ့ရဲ့အလယ်နာမည်က louise' လို့ပြောတယ်
- Louise (@loobixcube) ဒီဇင်ဘာလ 11, 2014
Twilight Zone-esque Louise ဖြစ်စဉ်မှချွင်းချက်တစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည်နှင်းဆီဖြစ်သည်။ သင်ဟာအထူးသဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအဖြူရောင်နှင့်သင့်အလယ်တန်းနှင့်သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘုတ်နာမည် မဟုတ်ပါဘူး Louise, ထို့နောက်အကြောင်းရင်း - ဤနေရာတွင်နှုတ်ယူခြင်း၏အနီး - clairvoyant အချို့ကျွမ်းကျင်မှုအဘို့အဆင်သင့်ရ - သင်၏အကြောင်းပြချက်သင့်ရဲ့အလယ်တန်းအမည်နှင်းဆီကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ျာငါလက်ဆောင်တစ်ခုရရှိပါသည်, ငါသိ၏။
ဘာကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်း Louise (သို့) နှင်းဆီကိုနာမည်အလယ်မှာထားရတာလဲ။
- gxz ?? (@Gezza_Ayy) ဇူလိုင်လ 3, 2015
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် Rose သည်လူကြိုက်များခဲ့သည် (Rose အမည်ရှိမိန်းကလေး ၄၇၅ သန်း) ။ (၁၉၉၅) တွင် (၄၄၅ သန်း) ခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။ မင်းသမီးမာဂရက်၊ မက်ကေးလာရွန်နီ (အိုလံပစ် meme မိန်းကလေး) နှင့်သင်မူလတန်းကျောင်းအတူတူကျောင်းတက်စဉ်ကပင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင်ရှိနေသေးသည့်မိန်းကလေးအားလုံး၏အလယ်အမည်လည်းဖြစ်သည်။
- STINKY LIVVY (@olemacdon) ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2017
သင့်ကိုယ်ပိုင် lipstick နယူးယောက်ကိုလုပ်ပါ
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောကလေးမလေးတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အလယ်နာမည် - နှင်းဆီဖြစ်သည်။
- sassy skye? (@sasssyskye_) စက်တင်ဘာ 18, 2016
ဘာလို့ Emily လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးတိုင်းအလယ်နာမည်ကိုရို့စ်လို့ခေါ်ရတာလဲ
- Adam Shenk? (@ AdamShenk182) သြဂုတ်လ 31, 2016
- ရောဘတ်ဘရောင်း (@BatmanHairline) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်က၊ အင်တာနက်ဟာအဆိုးမြင်ဝါဒီဖြစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆိုးမြင်ဝါဒကမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်လို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသတိပြုမိတဲ့လူအများစုကဒီနာမည်တွေရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာအခြေခံဖြစ်လို့အဲဒါကိုအလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ မိန်းကလေးများဘုံ၌ရှိသောအရာအားလုံးကိုအင်တာနက်အားဖြင့်အခြေခံဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်မှာငါ့ကိုသင်လိုချင်သောအရာမှန်သမျှကို အခြေခံ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သော်လည်း, ဤလူမှားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Louise နှင်းဆီဖြစ်စဉ် (ငါကလူပညာရေးဆိုင်ရာစာတမ်းများအတွက်ပါရမီ၏ဤအလုပ်ကိုးကားသောအခါငါအဘို့အ dubbing တာပါကဲ့သို့) အခြေခံမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာရယ်စရာပါ။ သင်မိန်းကလေးများပြည့်နှက်နေသောအခန်းတစ်ခန်းတွင်သင်မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်သတ္တိရှိရန်အရက်မပါဘဲမသိရသောစကားပြောခန်းအတွက်အစာကျွေးသည်။ ဤတွင်သင်၌တူညီသောအရာပါပဲ: သင်တို့ရှိသမျှသည်အလယ်တန်းအမည်နှင်းဆီသို့မဟုတ် Louise ရရှိပါသည်။ အဆိုပါအစ်မကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ဘွန်း။